» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २४
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २४
२ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:३२
मकवानपुर, २ साउन । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ को काठमाडौँ अडिसनबाट केही प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका छन् । दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका प्रतियोगीहरुको जानकारी दिने उदेश्यले तयार पारिएको यस भिडियो सिरिजको यो २४ औँ भाग हो । यस भागमा काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका थप ५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस भागमा रोज सुनामी राई, नविन्द्र राई, सुनन्द ढकाल, रञ्जन राई लगायतका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
६) रोज सुनामी राई–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका छैटौँ प्रतियोगी हुन् रोज सुनामी राई । धरान निवासी रोज सानैदेखि संगीतमा रुचि राख्थे तर परिवारबाट संगीत क्षेत्रमा लाग्न त्यति सहयोग नभएका कारण उनले संगीतमा अघि बढ्न पाएनन् । तर उनी संगीत क्षेत्रमा लाग्न निकै प्रयासरत रहे । पूर्वाञ्चल आईडलको फाईनालिष्ट समेत रहेका रोजलाई गायक बनाउने रहरले नै काठमाडाँैसम्म डोरायो । एसएलसी सक्नेबित्तिकै संगीत सिक्न भन्दै काठमाडौँमा आए तब उनका संघर्षका दिनहरु सुरु भयो । संगीत सिक्ने रहरले स्वदेशमा पनि काममा लागेका उनी वैदेशिक रोजगारीसम्म पुगे । तर उनी वैदेशिक रोजगारीबाट पनि संगीत सिक्न नपाएको भन्दै स्वदेशमा फर्के । उनले नेपाल हिरो अफ ट्यालेन्ट लगायतका विभिन्न शोहरुमा पनि सहभागिता जनाएका छन् । साथै उनका केही ओरिजिनल गीतहरु पनि बजारमा सार्वजनिक भईसकेको छ । उनले अडिसनमा ‘घाम र रातको भेट’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतमा निर्णायकहरुलाई प्रभावित पार्न नसकेपनि उनले दोस्रो गीतमा भने निर्णायकहरुलाई प्रभावित पारे । उनले दोस्रो गीतका रुपमा ‘भेटैमा भयो सोल्टिनी ज्यू’ बोलको गीत गाएका थिए । त्यसपछि उनले ‘तिमलाई चाहेर मैले’ बोलको गीत गाएर निर्णायकहरुलाई थप प्रभावित पारेका थिए । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
७) नविन्द्र राई –नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका सातौँ प्रतियोगी हुन् नविन्द्र राई । खोटाङ निवासी नविन्द्र संगीत पनि सिकाउँछन् । विभिन्न कभर गीत प्रतियोगिताहरुमा पनि सहभागी भईरहने नविन्द्र विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पनि प्रस्तुति दिन्छन् । उनले अडिसनमा ‘तिमी जुन रहरले’ बोलको गीत गाएका थिए । सोही गीतबाट उनी दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
८) सुनन्द ढकाल –नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका आठौँ प्रतियोगी हुन् सुनन्द ढकाल । द भ्वाईस नेपालबाट चर्चा कमाउन सफल सुनन्दका केही गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेका छन् । सुनन्दले अडिसनमा ‘चिनाजानी भएपछि’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले त्यसपछि ‘तिमी आउन सक्छ्यौ’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले तेस्रो पटक ‘आफ्नो मन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
९) रञ्जन राई –नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका नवौँ प्रतियोगी हुन् रञ्जन राई । ताप्लेजुङ जिल्ला निवासी रञ्जन हाल काठमाडौँमा बसोबास गर्छन् । ७ वर्षदेखि गीत गाउन सुरु गरेका रञ्जनले विभिन्न सांगितिक क्षेत्रमा सहभागी हुने मौका पाएका थिए । विभिन्न गायकहरुको आवाज हुबहु निकाल्ने खुबी भएका रञ्जनका विभिन्न गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेका छन् । उनले अडिसनमा ‘भन के छ बन्दोबस्त’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले त्यसपछि ‘खोराङ्बा खोला’ बोलको पुर्वेली गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
१०) दशौँ प्रतियोगी –नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका दशौँ प्रतियोगीको प्रस्तुति एपिसोडमा देखाइएको थिएन । तर उनी ट्रफी लिँदै बाहिरिँदै गरेको दृश्यभ ने समावेश गरिएको थियो । उनी को हुन् भन्ने बारेमा नेपाल स्टारको दोस्रो राउण्डमा मात्र थाहा पाउन सकिएला जस्तो देखिएको छ । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।